Imithetho elishumi elinesithathu yebhola yebhola yebhola-basket
Imithetho yeshumi elinesithathu yebhola yebhola yebhola-basket
Umngenisi udala iMithetho eya kusinda namhlanje
Ibhola lebhola lebhola ngumdlalo wokuqala waseMelika owenziwe nguDkt. James Naismith ngowe-1891. Wakhele yona ngemithetho yayo. Le yimithetho eyapapashwa ngoJanuwari 1892 kwiphephandaba le-school apho waqalisa khona umdlalo.
Imithetho ichaza umdlalo ongeyintlalo engathintana nayo edlalwa ngaphakathi. Bayazi kakuhle ukuba abo banandipha ibhola yebhoksi ngaphezulu kweminyaka eyi-100 kamva baya kuyibona njengemidlalo efanayo.
Nangona zikhona ezinye, imigaqo emitsha, le nto isenza intliziyo yomdlalo.
Imigaqo eyi-13 yeBhola ibhola nguJames Naismith
1. Ibhola ingaphoswa nayiphi na indlela kunye nanye okanye zombini izandla.
Ulawulo lwangoku: Lo usengumgaqo wamanje, ngaphandle kokuba iqela livumelekile ukulibuyisela kumgca we-middle row xa beyithatha loo mgca.
2. Ibhola inokubethwa kunoma yiphina isalathisi ngesinye okanye zombini ngezandla, kodwa ungabi naso.
Ulawulo lwamanje: Lo usengumgaqo wamanje.
3. Umdlali akanako ukugijima nebhola. Umdlali makayiphonsa kwindawo ayeyibamba ngayo, isibonelelo senziwe ukuba umntu agijime ngokukhawuleza.
Ulawulo lwangoku: Abadlali banokukrazula ibhola ngesandla esinye njengoko bahamba okanye badlula, kodwa abanako ukugijima ibhola xa bebamba idlula.
4. Ibhola kufuneka ibanjwe ngezandla. Iingalo okanye umzimba akufanele zisetyenziselwe ukubamba.
Ulawulo lwangoku: Sekunjalo lusebenza, luya kuphula umthetho.
5. Akukho kuhluthwa, ukubamba, ukunyusa, ukubetha okanye ukunyathela ngandlela-thile. Ukuphulwa kokuqala kwalo mgaqo ngunoma ubani uza kuba njengento epholileyo; okwesibini uya kumthobela kude kube yinjongo elandelayo eyenziwe okanye, ukuba kwakukho injongo ebonakalayo yokulimaza umntu, kulo lonke umdlalo. Akukho ndawo ingavunyelwa.
Ulawulo lwangoku: Ezi ntshukumo zincinci kwaye umdlali angafanelekanga ngeentlanu ezintlanu okanye ezintandathu okanye afune ukukhangela okanye ukumiswa ngcola.
6. Inkohlakalo ibetha ibhola ngenqindi, ukuphulwa kweMithetho 3 no-4 kwaye njengoko kuchazwe kuMgaqo 5.
Ulawulo langoku: lusebenza.
7. Ukuba elinye iqela lenza izihlwele ezintathu ezilandelelanayo ziza kubalwa njengenjongo kubadlali (inqanaba elilandelelanayo ngaphandle kwabachasene okwangoku okwenza inkohlakalo).
Ulawulo langoku: Esikhundleni somgomo ozenzekelayo, iqela elaneleyo leqela (ezintlanu kwikota ye-NBA play) ngoku ibhaso ibhonasi yamahhala iphonsa iinzame kwiqela eliphikisayo.
8. Injongo iya kwenziwa xa ibhola iphoswe okanye ihluthwa kwiindawo eziza kubhasikidi kwaye ihlala apho, ukubonelela abo bavikela umgomo bengenzi nto okanye bangaphazamise injongo. Ukuba ibhola ihlala emacaleni, kwaye umchasi uhambisa ibhasikidi, iya kuba njengenjongo.
Ulawulo lwangoku: Kumdlalo wokuqala, ibhasikidi yayiyibhaskiti kwaye ayikho i-hoop enomnatha. Lo mgaqo uphumelele kwimigqaliselo yokujolisa imigomo kunye nokupasa. Abakhuseli abanakuchukumisa umgca we-hoop xa ibhola lidutshulwa.
9. Xa ibhola iphuma emideni, iya kuphoswa entsimini ize idlale ngumntu wokuqala ochaphazelayo.
Kwimeko yokuphikisana umpiresi uya kuwuphosa ngqo entsimini. Umphangi uvumelekile imizuzwana emihlanu. Ukuba uyayigcina ixesha elide, liya ku-mpikiswano. Ukuba naluphi na icala lugcina ukulibazisa umdlalo, umvunyi uya kubiza inkohlakalo kubo.
Ulawulo lwangoku: Ibhola ngoku iphoswe ngumdlali ovela kwelinye iqela lomdlali oye wagqithisa oko ngaphambi kokuphuma emida. Umgaqo wesi-5 wesibili usasebenza.
10. Ummphiri uya kuba ngumgwebi wamadoda kwaye uya kuqaphela iifumba kwaye azise umpempe xa zenziwe ziintlanu ezintathu ezilandelanayo. Uya kuba namandla okungafanelekanga amadoda ngokwemigaqo yesi-5.
Ulawulo lwangoku: Kwi-basketball ye-NBA, kukho abadlali abathathu.
11. Umpempe uya kuba ngumgwebi webhola kwaye uya kuthatha isigqibo xa ibhola idlala, kwimida, ngapha nangapha, kwaye iya kugcina ixesha.
Uya kugqiba xa iinjongo zenziwe kunye nokugcina iinjongo zeenjongo, nangayiphi na enye imisebenzi edlalwa ngumpempe.
Ulawulo lwangoku: Abagcini bexesha kunye nabagcini bamagosa ngoku benza ezinye zale mi sebenzi, ngoxa umpempe enquma ukufumana ibhola.
12. Ixesha liya kuba li-half quarters-minute half, kunye nemizuzu emihlanu yokuphumla phakathi.
Ulawulo lwangoku: Oku kuhluka ngohlobo lokudlala, njengesikolo esiphakamileyo kunye noqeqesho. Kwi-NBA, kukho iikota ezine, nganye imizuzu eyi-12 ubude, kunye nekhefu eli-15 lomzuzu.
13. Icala lokwenza iinjongo ezininzi ngexesha elo liya kuthiwa liphumelele.
Okwangoku: Umndilili ngoku unqunywe ngamaphuzu. Kwi-NBA, ixesha elidlulileyo lemizuzu emihlanu liyadlalwa xa kukho ityiti ekupheleni kwekota yesine, kunye nenqaku elipheleleyo ekugqibeleni ukuba liphumelele. Ukuba usaboshiwe, badlala elinye ixesha elidlulileyo.
Okunye: Imbali yeBhola yeBhola kunye noDkt James Naismith
USamuel Morse kunye neNtsholongwane yeTelegraph
Indlela Yokuba Indwendwe kwi "Ellen DeGeneres Show"
Izifundo zeZizwe eziMbambano
Iincwadi ezili-9 zePlani zeNdlu - IiKhathalogi zokuPhupha
Amazwi anomdla malunga neZindlu zase-US
Isenzi esingaqhelekanga (isiNgesi ngegrama)
Iinjongo zeMfazwe yaseMexico naseMerika
Funda indlela yokusebenzisa ngokufanelekileyo iSixano soSpanish esithi 'Ni'
IiVebhu ezitshintshileyo nezingenayo
U-Puter olinganiselayo: Into eyiyo, Yiyiphi i-Golfers okufanele ifande
I-Parazoa yoBukumkani bezilwanyana
Amagosa aseMfayeni kaShaolin
Icawa ye-Holy Sepulcher